Ezi Zimpawu zeZodiac ziyahambelana kodwa zihlala zohluliwe - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ezi Zimpawu zeZodiac ziyahambelana kodwa zihlala zohlulwe; Nantsi kutheni
Ngaba ukuhambelana kwakho kwakomelele, ukanti uphela uqhekeka? Ukuba oku kuvakala kuyindlala, uya kuba ulilungu lenye yezi zinto zidibeneyo!
Ngaba ukuhambelana kothando lwakho kubonisile ukuba wena kunye ne-ex yakho benimdibi ofanelekileyo, ukanti usaphela unentliziyo ebuhlungu kwaye ungatshatanga? Ngaba uyazibuza ukuba yonke le nto ihambe kakubi kangakanani? Ngelixa ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuluncedo ekuqikeleleni ukuba ubudlelwane bakho buza kusebenza njani ephepheni, inyani ngamanye amaxesha yahluke kakhulu. Oko kwathethileyo, ngokuqinisekileyo kukho ezinye indibaniselwano zokudityaniswa kwezinto ekucingelwa ukuba zilungile kunqabile ukuba zisebenze kwaye silapha ukufumanisa ukuba ngoobani aba babini, kwaye kutheni bengahambi nje umgama.
Xa sisaphula ukungqinelana kwehoroscope, ngokuqinisekileyo sisiqalo se abantu ababini bazonxibelelana njani t ngothando. Ngaba baya kuqhubeka njengendlu evuthayo, okanye baya kusoloko besilwa? Ngelixa kunjalo akunakwenzeka ukuba uqinisekise ukuba yonke intsebenziswano yeScorpio kunye neCancer, iya kukhokelela emtshatweni, amaxesha ngamaxesha kukungalingani. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kukho imidlalo ethile ebonakala ngathi ine-chemistry enkulu, kodwa isilele rhoqo kunokuba ucinga.
Ezi zibini zidibanisa ephepheni kodwa zihlala zihlukana ekugqibeleni
Ukufumana iqabane elifanelekileyo inokuba zizinto ezinzima. Awufuni mntu unaye amaxabiso ahluke ngokupheleleyo nezinto eziphambili ngokubaluleka, ngeli xesha kwelinye icala Ukufana kakhulu kunokukhokelela nakwizaphuli mthetho ezinzulu . Ngelixa indibaniselwano yobuntu elandelayo ithiyori kufanele ukuba ikhuphe ezona mpawu zibalaseleyo zodiac nganye, zihlala zikwaphula ukwahlukana, yiyo loo nto ke.
Aries - uLeo
Esi sibini sizingca kakhulu
Esi sisibini ngekhe ubufutshane kubunzulu okanye uthando! Bobabini ekucingeni nakwizenzo, kuya kubakho ungaze ube ngumzuzu otyhafileyo nge Leo kwaye IiAries ubuntu. Babo Amandla ahlaziyiweyo aya kuxhotyisana ukuzama izinto ebeboyike ukuzizama. Ngelishwa, zombini ezi zimpawu ziyazingca, la mandla ahlala ephela ukuthunyelwa kuwo ukhuphiswano olungenampilo edala ukuqhekeka kubudlelwane .
taurus gemini uthando ukuhambelana
Le duo inenkani kakhulu
Ezi zodiacs zisa okona kulungileyo omnye kwinqanaba leemvakalelo njengeLibra uhlobo lokunxibelelana kunye nesigulana ndiyancoma uSagittarius ’ ifilosofi kunye nenkululeko ubuntu . Olu nxibelelwano luya kuvumela omabini amaqela ukuba camngca ngamava adlulileyo kwanobunzulu beemvakalelo zabo. Inkqubo ye- umba uphakama xa kufikwa kumba wokuthemba , njengoko ezi zodiacs zokuzibophelela zingazukufuna ukwenza inyathelo lokuqala.
lithetha ukuthini inani u-3
Esi sibini sigcinwe ngokweemvakalelo
Lo mdlalo usebenza kakuhle amanqanaba amaninzi , Zibini zodiacs ezihlala ziziva zodwa zodwa eyahlukileyo . Ngelishwa, izakhono zabo zokunxibelelana musa ukwandisa kwiimvakalelo zabo njengoko bobabini bebaleka ukusukela kwindlela abavakalelwa ngayo ngokwenyani. Zombini ezi zodiacs mhlawumbi zifuna kancinci amaqabane athandana ngakumbi ukuzisa umngcipheko wabo kunye iimvakalelo ebebezityhale ezantsi.
Intombazana - iCapricorn
Olu dibana lukhulu kakhulu
Njengobabini bezodiac ezikrelekrele kwaye zombini ukuba sengqiqweni kwaye iingcinga ezinengqiqo , Ungalindela ukuba olu lwalamano lusebenze kakuhle kwaye lwenza ubukhulu becala. Ngokubalulekileyo nangona, umba omkhulu le miqondiso mibini iya kuba phezu a inqanaba lezesondo kunye nezothando . Xa kufikwa kubudlelwane obusondeleyo, akukho namnye kwaba babini abaziwa ngobukrelekrele babo nanjengoko ukuthanda kwabo kuhlala kuthunyelwa kuwo umsebenzi okanye iiprojekthi zobuqu .
IScorpio - iTaurus
Ezi zimbini azinakulinganiswa
La macala mabini ajongene ngokuqinisekileyo aya kutsala njengoko iintlantsi ziya kubhabha kwinqanaba lezesondo , hayi ekuqaleni kobudlelwane kuphela kodwa kulo lonke. Nangona kunjalo, ezi zodiacs zimbini mhlawumbi zezi uninzi lwenkani kunye ne-zodiacs ezinomona ze-horoscope, ke lindela Akukho namnye kubo oza kubuya umva ukusuka ekulweni. A impikiswano enye inokudlula ngokulula iye kwi uqhawuko olukhulu phakathi kwezi zimbini ezigqiba i- emva koko ubudlelwane obunetyhefu , kuba u ewe, abayi kuliginya ikratshi labo.
I-pisces kunye ne-aries zothando ziyahambelana
Iintlanzi - Umhlaza
Akukho phawu luzisa amandla amaninzi okanye ukuzenzekela kubudlelwane ukuze ufumanise ukuba umoya unokuba Ukuzithemba kancinci nditsho nokutshisa. Esi sibini sinokuba kakhulu ukukhetha ngokukhuselekileyo ephulukana nesibheno sayo sothando emva kwe uchulumanco lokuqala .
Ukubuyela umva kwi Mirror Iyure 02:20: Ingelosi yakho enguMlondolozi ithetha nawe…
amanani 9 umendo wobomi
Iintsingiselo zamakhadi e-archangel
Ngaba ii-aries kunye ne-capricorn ziyahambelana
indlela yobomi 8 imisebenzi
Ngaba ii-virgos kunye ne-sagittarius ziyahambelana
Ngaba ii-leos kunye ne-aquarius ziyahambelana